Sary avy any Maorisy: mariazy sambatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2018 21:54 GMT
(Tamin'ny 10 May 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Annoella sy Sebastien tamin'ny andro mariazin'izy ireo. Avy amin'i Sebastien Merion
Tany Nouvelle-Calédonie i Annoella sy Sebastien no nihaona. Avy any Maorisy i Annoella ary avy any amin'ny tanàndehiben'i Frantsa i Sebastien sy nonina ary namahana bilaogy momba an'i Nouvelle-Calédonie tao amin'ny 5 minutes en Nouvelle Caledonie. Hoy ilay bilaogera momba ity mariaziny nanasana olona miisa 150 ity izay natao andro zoma :
Nifidy ny lanonana [Maorisianina] Kreôla sy Frantsay izahay; zava-dehibe taminay nampifangaro ireo roa ireo. Nifanakalo ny voadinay tamin'ny teny Kreôla izahay … Nitsena anay ny dihy nentim-paharazana Sega tao amin'ny lanonana ary nisy ny hira mandramaraina ny andro. Nilaza taminay mihitsy aza ny mpiasan'ny hotely fa tsy mbola nahita fampakaram-bady tsara toy izany izy ireo na ilay ampakarina tena faly toy izany .